'पाकिस्तान युद्धको लागि तयार छ' | Makalukhabar.com
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान
साउन ३१, काठमाडौं । जम्मू कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम गेम खेले । यसले भारतलाई युद्धतिर धकेलेको छ ।
भारत अब पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा छ । यदी युद्ध नै भयो भने पनि पाकिस्तान यसका लागि तयार छ । नरेन्द्र मोदीजी को ईँटाको जवाफ हामी पथ्थरबाट दिनेछौँ । नरेन्द्र मोदीले खेलेको अन्तिम कार्डपछि काश्मीर स्वतन्त्रताको दिशामा जानेछ ।
अहिले जे भइरहेको छ, त्यो आरएसएसको विचारधाराका कारणले नै भइरहेको छ । आरएसएसको विचारधारा हिटलरको नाजी पार्टी समान छ । आरएसएसको जुन विचारधारा छ, नरेन्द्र मोदी त्यसको बचपनदेखि नै सदस्य थिए । यस आरएसएसले आफ्नो प्रेरणा हिटलरको नाजी पार्टीबाट लिएका थिए । यो नश्लीय श्रेष्ठता मान्थे कि हिन्दू डेमोहरु उत्तम छन् । उनीहरु सम्झन्थे कि मुसलमानलले हामीमाथि जो हुकुम गरेका छन्, अब यीनीहरुबाट बदला लिनुपर्छ ।
यो विचारधाराले मुसलमानसँग मात्रै होइन, ईसाईसँग पनि घृणा गर्छ । आरआरएसले आफ्ना सदस्यको दिमागमा यो भरेको छ कि, यदी मुसलमा हामीमाथि ६०० वर्ष शासन गर्दैन थिए तिनीहरु महान् देश बन्थे । उक्त विचारधाराले महात्मा गान्धीको हत्या गर्यो । यसै विचारधाराले पछि मुस्लिमहरुको पनि हत्या गरेको हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कश्मीरमा जुन दमन गरियो, यसै विचारधाराका कारण गरियो । नरेन्द्र मोदीले जुन कार्ड खेले, त्यो अन्तिम थियो । यो अन्तिम समाधान हो । हिटलरले पनि नाजीयाका लागि अन्तिम समाधान बनाएका थिए । मोदीले रणनीतिक त्रुटि गरे । यो मोदी र बीजेपीलाई निकै भारी पर्नेछ । किनकी कश्मीरलाई यीनीहरुले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे ।
पहिले कश्मीरका बारेमा कुरा गर्न मुश्किल भएपनि अहिले दुनियाँको नजर कश्मीरमाथि परेको छ । यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने भन्ने कुरा हामीमा निर्भर छ । म तपाईँको संसदको अगाडी जिम्मेवारी लिन्छु कि म कश्मीरको आवाज दुनियाँसामू उठाउने एम्बेस्डर हुँ ।
इतिहास हेर्ने हो भने बिरामी विचारधारा भएका व्यक्ति र अविश्वासी व्यक्तिहरूले हत्या हिंसा मच्चाएका छन् । मानिसहरुलाई अन्दाज छैन कि यो त्यही विचारधारा हो । विश्वका मानिसहरु यो कर्म र निर्वाण भएको देश हो भन्ने सोच्दछन्। उनीहरू हामीलाई आतंकवादी भन्थे तर भारत सहिष्णु मानिन्थ्यो। तर यदि यस विचारधाराको कसैलाई घाटा छ भने, त्यो सबैभन्दा धेरै हिन्दूस्तान (भारत) लाई हुनेछ ।
यीनहरुले भारतीय संविधान रद्द गरे । ३७० हाम्रो मामिला त थिएन । उनीहरु जम्मू कश्मीर उच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध गए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध गए । देश युद्धले होइन कानूनको अन्त्यबाट ध्वस्त हुन्छन्। न्यायाधीशहरु त्यहाँ डराएका छन् । मिडियालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । विपक्षी नेताको भाषण हेर्ने हो भने पनि लाग्छ कि उनीहरु डराइरहेका छन् । यस्तो नाजी जर्मनीमा हुने गथ्र्यो । उनीहरुको विचारधाराविरुद्ध बोल्नेलाई गद्दार भनिन्थ्यो । उसलाई मारिन्थ्यो कि भगाइन्थ्यो । भारतमा पनि मुसलमानले केही बोले भने उसलाई पनि पाकिस्तान जान भन्छन् । बुद्धिजीवी पनि डराउँछन् ।
यसले भारतलाई विनाशतिर लगिरहेको छ । भारतमा १८ देखि १९ करोड मुसलमान छन् । यो कम संख्या होइन । उनीहरुलाई डरमा राखिएको छ । उनीहरुको अधिकार मेट्न खोजेपछि आवाज त उठिहाल्छ । इंग्ल्याण्डमा हेर्ने हो भने मेनचेस्टर र बर्मिघम, जसलाई दबाइयो त्यो कट्टरपन्थी भयो । हिन्दुस्तानमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।
आरएसएस जसरी बाहिर आएको छ, यो यसै जाँदैन । यो अघि बढ्छ । अब सिखमाथि मुश्किल आउनेछ । दलितमाथि आउनेछ । ईसाईमाथि पनि आइसकेको छ । मुसलमानलाई त निसाना बनाइएकै छ ।
यो घृणास्पद व्यवहार काश्मिर सम्म रोकिने छैन, पाकिस्तान सम्म पनि आउनेछ । प्राप्त जानकारी अनुसार यीनीहरुले स्वतन्त्र काश्मीरमा एक्सन लिने योजना बनाएका छन् । जस्तै पुलवापछि यनीहरुले गरेका थिए । हाम्रो दुई पटक राष्ट्रिय सुरक्षा बैठक पनि भइसकेको छ ।
पाकिस्तानी फौजलाई युद्धको कडा अनुभव छ । २० वर्षदेखि शहीदको लाश उठाइरहेको छ । पाकिस्तानका फौजी र डेमो पनि तयार छन् । फौजसँगै डेमो पनि लड्नेछन् । मोदीलाई फेरि भन्छु– तपाईँ पनि गर्नुस्, हामी पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ । अन्तसम्म जानेछौँ । हामी अल्लाह बाहेक कसैको अगाडी झुक्दैनौँ ।
पाकिस्तान युद्धको लागि तयार छ
युद्धको मुद्दा समाधान हुँदैन । युद्धबाट एक मुद्दा हल गर्छौँ त अर्को तीन मुद्दा पैदा हुन्छन् । तर यो नरेन्द्र मोदीको दुराचार हो । पाकिस्तान पुरै तयार छ । हामीले फैसला गरिसकेका छौँ, यीनीहरुले केही उल्लंघन गरे, जसमा यीनीहरुले तयराी गरेका थिए । हामी पनि तयार छौँ । र त्यसपछि हामी सम्पूर्ण विश्वलाई युद्धको बारेमा भन्नेछौं, तपाईं यसको लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संगठन युद्ध रोक्नका लागि बनाइएको थियो । यो ती सबैको परीक्षण हो। यसका सदस्य के यसका सदस्यहरू सुरक्षा परिषद्को ११ प्रस्तावनाको पक्षमा खडा हुनेछन् ? तपाईंले कश्मीरका जनतालाई जुन आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुभयो, नरेन्द्र मोदीले यसलाई र अन्य प्रस्तावहरूलाई फालिदिए।
हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा निवेदन दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ, विश्वको हरेक चरणमा जानेछ । हामीले विश्वभरका पाकिस्तानी र कश्मीरी समुदायलाई भेला गरेका छौँ । भोलि लन्डनमा, ऐतिहासिक संख्याहरू काश्मिरका लागि बाहिर आउने छन्। अर्को महिना संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरु हुनेछ । तब तपाईँले यति धेरै मानिसलाई देख्नुहुनेछ कि पहिले कहिल्यै देख्नुभएको थिएन ।
जब त्यहाँ लगाइएको कर्फ्यू हटाइनेछ, हामी विश्वलाई भन्नेछौं कि यस समयमा भएको घटनाको लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। एकजना मानिस जसले त्यहाँ सैनिक पठाएको छ, त्यहाँ अत्याचार बाहेक अरु के हुँदैछ ? त्यसैले हाम्रो राजदूतहरू विश्वभरि सक्रिय छन्।
(काश्मीरको विधानसभामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश हो । यो पटक पाकिस्तानले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस १४ अगष्टमा कश्मीर एकजुटता दिवस मनायो । बुधबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान कश्मीरको राजधानी मुजफ्फरावाद पुगे । कश्मीरका राष्ट्रपति सरदार मसूद खान र प्रधानमन्त्री फारुक हैदरले उनलाई स्वागत गरेका थिए ।)
टुँडिखेललाई पुनःनिर्माण गरी चिटिक्क बनाइने
सरकारलाई काउन्टर दिने ल्याकत कांग्रेसको नभएकै हो ? (टिप्पणी)
फागुन ११, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर छ । सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको कांग्रेसकै केन्द्रीय नेताहरुले भनिरहँदा सदनमा सो विरुद्ध कांग्रेसको भूमिका देखावटी मात्र भएको छ । नेकपा ओली सरकारले फागुन १ गते दुई वर्ष पुरा गर्दा कांग्रेसले सरकारले गरेका... जारी राख्नुहोस...
बाँस्कोटा प्रकरण : ओलीलाई करनी र कथनी मिलाउने अवसर (सम्पादकीय)
बिहीबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा एक विदेशी एजेण्टसँग ७० करोड मोलमोलाई गरेको समाचार भाइरल भयो । हाम्राकुरा डटकममार्फत ब्रेकिङ भएको समाचार र बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस एजेण्टसँग गरेको कुराकानीको अडियो... जारी राख्नुहोस...
प्रचण्ड–ओली जोडीको अग्निपरीक्षाको मध्यान्तर
भगवान श्रीकृष्णको छोरा साम्बप्रति युवतीहरु भुतुक्कै हुन्थे । तर उनको प्रेम भने परमशत्रु दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणासँग बस्यो । उनीहरु एक अर्काप्रति यति आशक्त कि सँगै जिउने, मर्ने कसम खाएका थिए । यिनीहरुको प्रेमले पाण्डव र कौरव पक्षमा ठूलो हल्लीचल्ली मच्चियो । यदुवंशी खलकसँग छोरी लागेको दुर्योधनलाई सह्य... जारी राख्नुहोस...
‘रानो’ हराएको कांग्रेसलाई कसले जोगाउने ?
पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीलाई सधैं काँध थाप्ने निती बनाउँछ भने तीन वर्षपछिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।नेपाली कांग्रेस यतिबेला रानो हराएको मौरी जस्तै भएको छ । आन्तरिक गुटवन्दी, अस्पष्ट राजनीतिक एजेण्डा, कमजोर सांगठनिक अवस्थाले कुनैबेला नेपाली राजनीतिको पर्याय रहेको कांग्रेस अहिल... जारी राख्नुहोस...
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको समस्या र समाधानका ११ उपाय
साना हुन वा ठुला कुनै पनि समस्यालाई गम्भिरताका साथ समाधानका उपाय राज्यले खोज्न पर्छ । समस्यालाई वेवास्ता गर्ने, पक्ष वा विपक्षमा राज्यले विभेद गर्ने, अल्मल्याउने आदि इत्यादी विधिमा राज्य वा सरोकारपक्ष गैरजिम्मेवार बने भविष्यमा जन्मने नयाँ द्वन्द्वको भागिदार स्वयम राज्य सम्बन्धित पक्ष हुने भएकाले सबै... जारी राख्नुहोस...
संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी बर्षैभरी बज्यो (पूर्णपाठ)
आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात दुईबर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनु... जारी राख्नुहोस...